Gamepron Cold War mbanye anataghị ikike ats Ndị aghụghọ, Aimbot, ESP, Wallhack - Gamepron
GamePron Oku nke Ọrụ Black Ops: Cold War Hack
Jikọọ na ọkwa kachasị elu nke ndị na-agba ọsọ gburugburu ma ghọọ onye otu GamePron taa!
Hụ ihe ngwa anyị Black Ops: Cold War GamePron Hack bụ ihe gbasara! Zụta igodo ngwaahịa ụbọchị 1 taa.
Aghọtara gị na ụzọ gị na anyị ebe a na GamePron! Zụta igodo ngwaahịa dị izu 1 taa.
Mbanye anataghị ikike na COD Black Ops: Agha Nzuzo maka ogologo oge na GamePron! Zụta igodo ngwaahịa ọnwa 1 taa.
Ndị iro gị agaghị enwe ohere imeghachi omume nke ụlọ ọrụ Cold War hacks, nke ahụ bụ nkwa.
COD Black Ops: Cold War GamePron Hack Ozi
Egwuregwu Black Ops: Cold War GamePron bụ ihe yiri ọla edo n'ime ụlọ ọrụ hacking, ebe ọ bụ na ị gaghị enweta ngwá ọrụ maka egwuregwu ọhụrụ nke ụdị a. GamePron tinyere ngwa ọrụ a site na enyemaka nke ndị mmepe mbanye anataghị ikike, ọ bụ ezie na ọ naghị arụ ọrụ maka Warzone, ọ ka na-enye ndị ọrụ Intel na AMD nnukwu mmụba na Cold War. Ọ na-abịa n'asụsụ Bekee ma na-akwado GPU nke Nvidia / AMD, yana ka ọ na-arụ ọrụ na Warzone, ọ bụghị iji ya mee ihe mgbe ị na-egwu ya. Ndị na-emegide gị enweghị egwuregwu maka COD Black Ops: Cold War GamePron Cheat!
Onye iro na ndị otu egwuregwu ESP ga-ahapụ gị ka ị hụta ha site na mgbidi, yana Distance ESP na-eme ka ị mata etu esi agbadoro (ma ọ bụ tere aka). Agha Nzuzo Aimbot nwere ike ịhazi anyị FOV gburugburu, Igodo Ọkpụkpụ Nhazi, na Azọ Ebumnuche Ebumnuche. Ebumnuche Ebumnuche ga-eme ka ndị ọrụ mara anya nke igbu egbu nwere ike!
Chọsie ụzọ kacha mkpa
Ebumnuche + esp ọrụ na zombie mode.
Banyere COD Black Ops: Cold War GamePron
GamePron bụ akara mgbe nile nke na-ejikọta hacks dị elu, n'agbanyeghị ụdị. Anyị na-abịakwute ngwa ọrụ anyị niile na otu echiche ndị ọzọ na-eweta mbanye anataghị ikike na-atụ anya inweta onwe ha, nke bụ otu na-elekwasị anya na mma. Ndị ọrụ anyị nwere ike ịhụ n'onwe ha otu GamePron raara onwe ya nye si bụrụ usoro mmepe nke ngwa ọrụ ọ bụla anyị wepụtara, ebe akaebe dị n'ihu gị. Site inweta a cheat, ị ga-enwe ike ịchịkwa ọkụ site onwe gị! Ngwuputa nka nke ndi otu gi na ndi mmegide gosiri abaghi ​​uru mgbe COD Black Ops: Cold War GamePron na aru oru.
Gini mere eji jiri COD Black Ops: Cold War GamePron kari ndi ozo?
Ndị ọzọ na-enye ọrụ enweghị ike ileghara ndị ọrụ ha anya, ọ bụ ya mere na ha enweghị nsogbu na ịhapụ ngwaọrụ ndị na-erughị ogo kacha nta. GamePron abụghị naanị na ọ ga-enye ndị ọrụ aghụghọ aghụghọ Cold War, anyị ga-eme ya na mgbanwe. Get ga - ahọrọ ogologo oge ịchọrọ iji ngwa anyị, mana anyị amatalarị na ị ga - ejikọ gị mgbe nyocha mbụ. Họrọ onye mmegide gị na ọkwa dị iche iche nke nkenke ga-ekwe omume COD Black Ops: Cold War GamePron Cheat, mana ọ bụghị naanị were okwu anyị maka ya. Bụrụ onye otu GamePron taa ma ị nwere ike ịnweta ihe niile Hacks Cold War ha nwere inye onwe gị.
Otu n'ime akụkụ kachasị eleghara anya nke mbanye anataghị ikike ọ bụla n'ahịa kwesịrị ịbụ menu egwuregwu, nke bụ njikọ dị n'etiti ndị ọrụ na ngwaọrụ n'onwe ha. Ọ bụrụ na ịnweghị menu egwuregwu a pụrụ ịdabere na ya nke na-enye gị ohere ịhazi ntọala mbanye anataghị ikike gị, ị ga-ekpu ìsì! GamePron nwere menu egwuregwu zuru ezu nke na-enye gị ohere ịhazi ahụmịhe mbanye anataghị ikike site na elu ruo na ala, nke nwere ike ịdị oke egwu maka ịga nke ọma gị na egwuregwu dị ka COD Black Ops: Cold War. Also na-achọ ijide n'aka na mbanye anataghị ikike na-arụ ọrụ n'ụzọ aghụghọ, nke enwere ike ịme naanị na ntọala mbanye anataghị ikike. Nweta usoro hacking nke ahaziri iche na GamePron!
A6. Ee, enwere ike iji ngwaahịa a na ọnọdụ ihuenyo windo ọ bụla, megidere Warzone nke gara aga.
Q7. Enwere m ike iji ndị njikwa?
A7. Ee, ma ebumnuche chọrọ remap na a remap ngwá ọrụ.
Zụta igodo ngwaahịa nke aka gị taa ma nweta ihe GamePron nwere inye! Ndị kasị pụrụ ịdabere na Cold War Ndị aghụghọ online bụ naanị a click pụọ.
Njikere Na-achị na anyị ngwa BO GamePron mbanye anataghị ikike?